Amaahda guryaha (Somaliska) - Göteborgs Pantbank
/ Select a language / Amaahda guryaha (Somaliska)
Amaahda guryaha (Somaliska)
Waa inaad 18 jir noqotaa si aad lacag ugu amaahato pawnshop-keena.
Waxaad ubaahantahay lambarka soshal sekuuriti si aad lacag ugu amaahato pawnshopkeena.
Waad kadoon kartaa wax kasta oo leh qiimo dib-u-iibsi oo aan si ammaan ah u kaydin karno una maamuli karno.
Waxyaabaha caadiga ah ee laysku xidho waa dahabka, elektaroniga, saacadaha, farshaxanka iyo waxyaalaha qadiimiga ah. Waxaan leenahay khubaro dhammaan dhinacyada oo dhan waana ku faraxsanahay inaan kaa caawinno inaad go’aamiso qiimaha alaabtaada.
Khubaradayada ayaa go’aamin doona qiimaha iibka ee alaabtaada ku saleysan da’da, tayada, qalabka iyo kartida iibka. Oo waxaad amaahan kartaa 80% qiimahaas iibka ah.
Tallaabada xigta waa in la go’aamiyo inta lacag ee aad jeceshahay inaad deynsato iyo goorta aad rabto inaad soo ururiso shaygaaga. Deymahayagu waxay soconayaan 1-4 bilood, haddii aadan rabin ama aad furan kartid deynta marwalba waad cusbooneysiin kartaa amaahda.
Ka dib markaan ku heshiinno amaahda waxaad heli doontaa lacagta loo diro koontadaada bangiga ama haddii ay yar tahay waxaad ku heli kartaa lacag ahaan.
Soo fur oo cusbooneysii amaahda
Markuu amaahgu dhammaado waxaad dooran kartaa inaad soo ururiso alaabtaada, waxaad dib u soo celin doontaa qadarka la bixiyay iyo dulsaarrada iyo kharashyada is biirsaday. Haddii aad rabto inaad dib u cusboonaysiiso amaahdaada bil kale oo ah 1-4, waxaad bixin doontaa dulsaaryada iyo kharashaadka is biirsaday.
Waad ku cusbooneysiin kartaa amaahdaada midkastoo ka mid ah guryaha wax lagu iibsado ama loo maro Swish. Haddii aad rabto inaad ku cusboonaysiiso amaahdaada Swish fadlan wac mid ka mid ah pawnshop-keena si aad u hesho lacagta saxda ah ee ay tahay inaad bixiso.
Haddii aad rabto inaad soo furato amaahdaada, fadlan booqo pawnshop-ka aad amaahda ku heshay.
Hadana haddii aadan rabin inaad alaabtaada wada qaadato, waanu kuu iibin doonnaa xaraashkeena. Haddii ay jiraan wax dheeri ah xaraashka ka dib waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad timaaddo oo aad ka soo ururiso wixii dheeri ah meesha lagu iibiyo alaabadaada.
Dantayadu waxay ka timid 2,5% bishii. Kharashkeena safarku waa 50 kr, waa inaad bixisaa khidmadda safarka markaad cusboonaysiiso amaahdaada.
Haddii aad go’aansato inaadan aruurin alaabtaada, wax lacag ah lagama qaadi doono.
amaah ilaa 10000 kr 3,25% / bishii
qayb ka mid ah amaahda 10000 kr 2,50% / bishii
Heerka dulsaarka iyo khidmadaha
Amaah ilaa 10 000 kr 3.25% 39%
Qayb ka mid ah amaahda 10 000 kr 2,5% 30%
1000 kr 32,50 kr / bil
3000 kr 97,50 kr / bil
5000 kr 162,50 kr / bil
10 000 kr 325 kr / bil
25 000 kr 700 kr / bil
50 000 kr 1325 kr / bil
Lacagta safarka 50 kr
Tigidh lumay tigidh 30 kr
Lacagta xasuusinta 30 kr
dib u dhigid 50 kr
Lacag ka dib taariikhda la filayo 100 kr
Ka saar amaahda xaraashka 200 kr
Xisaabi kharashka amaahda iyo khidmadaha
Ma rabtaa inaad amaahdo lacag oo aad rabto inaad ogaato qiimaha?
Halkan waxaad ku isticmaali kartaa kalkuleytar si aad u aragto inta amaahdu kugu kici doonto ka dib wakhti la doortay.
Välj lånebelopp 1000 2000 3000 5000 10 000 15 000 20 000 30 000 40 000 50 000 100 000
Välj tid 1 månad 2 månader 3 månader 4 månader
Qiimaha kore waa wadarta kharashka bixinta amaahda.
Kuwaas oo ay ka mid yihiin qaddarka amaahda, kharashka dulsaarka iyo khidmadda maaraynta.
Ha iloobin in dulsaarka la jari karo.